သေခါနီး ဝေဒနာအားရှု့မှတ်နည်း ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
(မေးခွန်း) . "ဆရာတော်ဘုရား... သေခါနီး ဝေဒနာတွေ အပြင်းအထန် ခံစားရတဲ့အခါ ဝေဒနာကို "တိုက်ရိုက်ရှုရမလား" / "ခွာပြီးရှု ရမလားဘုရား " ။
တပည့်တော်ဆိုလိုတဲ့ ဝေဒနာ ကို ခွာပြီးရှုတယ်ဆိုတာ ဝေဒနာပေါ်မှာ တိုက်ရိုက်မရှု့ဘဲ ဝင်လေ ထွက်လေမှာဖြစ်ဖြစ်၊ အရင်က ပြုခဲ့ဖူးတဲ့ ဒါန, သီလ အစရှိတဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှု အာရုံတစ်ခုခုမှာဖြစ်ဖြစ် ၊ အာရုံကို ထားထားတာ ကို ဆိုလိုတာပါ။ တပည့်တော် ဆိုလိုတဲ့ ဝေဒနာ ကို တိုက်ရိုက်ရှုတယ် ဆိုတာ တပည့်တော်တို့ အခု တရားစခန်းမှာ ရှုနေရသလို ဝေဒနာရဲ့သဘောတွေ၊ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို တိုက်ရိုက်ရှုတာကို ဆိုလိုတာပါဘုရား။ . .
(အဖြေ) . . "ဝိပဿ နာ ဖြစ်စေမည့်တစ်ခုခုကို ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ကောင်းပါတယ်။ ဝေဒနာကို ခွာပြီး တခြား ကုသိုလ်အာရုံတွေမှာ စိတ်ကိုထားတာကတော့ နည်းနည်းသက်သာတာပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် ဝေဒနာ ကို ခွာထားရုံနဲ့ မရသေးဘူး၊ကိုယ့်ဘေးမှာ ငိုနေ၊ ပူလောင်နေကြမယ့် သူတွေရဲ့အာရုံတွေ၊ တခြားအာရုံတွေကလဲ ရှိသေးတယ်။ ပြီးတော့ ဒါနအာရုံနဲ့သေရင် နတ်ပြည် ရောက်နိုင်တယ်။ သီလ နဲ့သေလဲ အတူတူပဲ။ ဒီ့ထက် မပိုဘူး။
ဝေဒနာတွေရဲ့ ဖြစ်မှုပျက်မှု၊သဘောတွေကို တိုက်ရိုက်ရှုနေမယ်ဆိုရင်တော့ ဝိပဿနာ အာရုံဖြစ်နေတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ ပါရမီလဲရှိလို့ ဥာဏ်ရင့်ကျက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သေခါနီးမှ ကပ်ပြီး တစ်မဂ်, တစ်ဖိုလ် လည်း ဆိုက်သွားနိုင်တယ်။ အဲဒီလိုမှ... တစ်မဂ်, တစ်ဖိုလ်လည်း မဆိုက်ဘူး, ဈာန်လဲ မရဘူးဆိုရင် - "လူ့ပြည်, နတ်ပြည်" ရောက်နိုင်တယ်။ ခုနက ကုသိုလ်အာရုံတစ်ခုခုနဲ့ သေရင်လဲ " လူ့ ပြည်, နတ်ပြည်"ရောက်နိုင်တာပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ "ကုသိုလ်အာရုံလောက်" နဲ့ နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့ သူက နတ်ပြည်မှာ ပျော်စရာနဲ့တွေ့ရင် ပျော်စရာတွေဘက် ပါသွားပြီး တရားအားမထုတ် ဖြစ်တော့ဘူး။ "ဝိပဿနာအာရုံ" နဲ့ ရှုမှတ်ပြီး သေခဲ့တဲ့သူက လူ့ဘုံ, နတ်ဘုံတွေရောက်တဲ့အခါမှာလဲ မေ့မေ့လျော့လျော့မဖြစ်ဘဲ "ဝိပဿနာတရား" ကို ဆက်ပြီးပွားများအားထုတ်လိုက်တဲ့ အခါ "တရားထူး, တရားမြတ်" တွေ "မဂ်ဥာဏ်, ဖိုလ်ဥာဏ်" တွေ ရသွားနိုင်တယ်။ အဲဒီလို ကွာခြားမှုရှိတယ်။
ငါတို့တွေ အခု တရားစခန်းမှာ ဝေဒနာတွေ ရှု့နေတာလဲ အသေကျင့်နေတာနဲ့ အတူတူပဲပေါ့။ ဒါပေမယ့် သတိထားရမယ့်အချက်က အရင်က ဝေဒနာတွေ ရှုမှတ်ပွားများပြီး ဝေဒနာတွေကို လွှမ်းမိုးအောင် ရှုတတ်, မှတ်တတ်ဖူးပေမယ့် ပုံမှန်အမြဲတမ်း ဆက်တိုက်လေ့ကျင့်မှုမရှိဘူး။ ကြားမှာ အားထုတ်ဖြစ်မထားဘူးဆိုရင်တော့ " သေခါနီး" အခါမှာ နိုင်နိုင်နင်းနင်း "ရှုမှတ်နိုင်ဖို့ "ခက်ခဲပါမယ်။ ဒါကြောင့် အမြဲတမ်းလိုလို အလေ့အကျင့်ဖြစ်နေအောင် နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ရှုမှတ်ပွားများပေးနေသင့်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ အသေလေ့ကျင့်ရာလဲရောက်သလို သေပြီးတဲ့ နောက်ဘဝမှာလည်း မမေ့မလျော့နဲ့ ဝိပဿနာတရားတွေ ဆက်လက်ပွားများအားထုတ်ရင်း "မဂ်ဥာဏ်ဖိုလ်ဥာဏ်" တွေ ရရှိသွားနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရရှိသွားမှာပါ။
. ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ သေခါနီးဖြစ်တဲ့ စိတ် ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ .
သေခါနီးဖြစ်တဲ့ စိတ်ဟာ အရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ် ။ လားရာသုဂတိကို ချက်ချင်းအကျိုးပေးနိုင်ပါတယ် ။ ဒီအကြောင်းတရားကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်က ယခုလိုဟောကြားခဲ့ပါတယ် ။
နွားကျောင်းသားဟာ နေ၀င်လို့ နွားတွေကို ခြံထဲသွင်းတဲ့အခါမှာ နွားပျို နွားပေါက်စလေးတွေက ရှေ့ဆုံးကနေ တိုးဝှေ့ပြီး ၀င်ကြတယ် ။ ဒါပေမယ့် မသန်မစွမ်းတော့တဲ့ နွားအိုကြီးတွေကတော့ ဘယ်လောက်ပဲ ရိုက်နှက်ခြောက်လှန့်သည်ဖြစ်စေ ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲ နောက်ဆုံးကနေ ၀င်ကြတယ်။ နောက်ဆုံး နွားခြံကို ပိတ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ နွားအိုကြီးတွေကခြံပေါက်ဝမှာပဲ အိပ်ကြရတယ် ။ ဒါပေမယ့် နောက်တစ်နေ့ နွားတွေကို ခြံထဲက ပြန်ထုတ်တဲ့အခါမှာတော့ ခြံဝမှာ အိပ်နေတဲ့ နွားအိုကြီးတွေကပဲအရင်ထွက်ခွင့်ရပါတယ် ။ နွားပျိုနွားငယ် တွေကတော့ နောက်ဆုံးမှပဲထွက်ကြရပါတယ် ။ အဲ့ဒီလိုပဲ သေခါနီး ခိုကိုးရာမဲ့နေတဲ့ အချိန်မှာ ဖြစ်တဲ့စိတ်ဟာအရင်ဆုံးအကျိုးပေးပါတယ် လို့ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ် ။
၀ိပဿနာအသိ မရှိတဲ့ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သေရရင်ဖြင့် အရမ်းကို ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ် ။ ကြည့်လေရာ မြင်လေရာက ကိုယ်တစ်ဘ၀လုံး စွဲခဲ့တဲ့အရာတွေချည်းပါပဲ ။ အိမ်တွေ အသုံးအဆောင်တွေ အ၀တ်အစားတွေ သား သမီး လင်မယားတွေ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေ ။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတာတွေအကုန်လုံးက ကိုယ့်ကို အပါယ်ဆွဲချမယ့် အရာတွေချည်းပဲ ။ ဒါကြောင့် တစ်ချို့ နားလည်သဘောပေါက်တဲ့ လူတွေဟာ သူတော်ကောင်းနေရာ မေတ္တာဓါတ်လွှမ်းခြုံတဲ့နေရာ ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ နေရာတွေမှာ ကြိုတင်စီစဉ်ပြီး သေဆုံးလေ့ ရှိကြပါတယ်။ သေမယ့်အချိန်ကိုကြိုမသိနိုင်ပေမယ့် အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာပဲ ဘ၀ရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်တွေကို ဖြတ်သန်းသွားကြပါတယ် ။ ကြောက်လည်း ကြောက်စရာပါပဲ။အပါယ်ကျသွားလို့ ဘွာတေး လုပ်လို့ မရပါဘူး ။
အကုသိုလ် အစွဲအလန်းတွေ အားကြီးလွန်းလို့ သေခါနီး ၀ိဥာဉ်မချုပ်နိုင်ပဲဆန့်တငင်ငင် ဖြစ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါတယ် ။ တစ်ချို့ကလည်းအကုသိုလ်စေတနာ ကုသိုလ်စေတနာ သိပ်ကြီးကြီးမားမား မရှိ၊ ၀ိပဿနာဥာဏ်ကလည်းမရှိတော့ သူ့ ကံက သူ့ကို ဘယ်ပို့ရမှန်း မသိပဲ ဟိုစိတ်ရောက်လိုက် ဒီစိတ်ရောက်လိုက်နဲ့ ကြာနေတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါကိုပဲ ဘေးကလူက ဟိုလူ့စောင့်သလိုလို ဒီလူ့ စောင့်သလိုလို သားကိုပဲ မျှော်သလိုလို သမီးကိုပဲမျှော်သလိုလိုထင်တော့တာပါပဲ ။ သားလေး ရောက်လာပြီ သမီးလေး ရောက်လာပြီထကြည့်ပါဦး လို့ ဘေးကများ ကုန်းအော်လိုက်လို့ကတော့ သေတဲ့သူ တစ်ခါတည်း သွားရော့ ငရဲအိုးပဲ .. အပါယ်လေးဘုံကို တန်းနေအောင် ပြေးပါတော့တယ် ။သေတဲ့သူကို ဆွဲခါ လှုပ်ယမ်း ဖက် ပြီး အော်ငိုတာကတော့ အဆိုးဆုံးပါပဲ ။ကျလုကျခင် ဖြစ်နေတဲ့သူကို ချစ်သလိုလိုနဲ့ ဆောင့်ကန်ချလိုက်တာပါပဲ ။
လုပ်ခဲ့ပါရဲ့ ဒါပေမယ့် သေခါနီးကျတော့လှူတုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ စေတနာကို ပြန်မစွဲပဲ ကျောင်းစွဲ ဘုရားစွဲ ဇရပ်စွဲအဲ့လို စွဲတော့ ကျောင်းစောင့် ဘုရားစောင့် စေတီစောင့်တွေပဲ ဖြစ်ကြရတယ် ။ ရိပ်သာမှာ အားထုတ်ခဲ့ပေမယ့် ၀ိပဿနာစိတ် မဖြစ်ပဲ ရိပ်သာစွဲသေတော့ရိပ်သာစောင့် ဖြစ်ရပြန်တယ် ။ စေတနာကို ပြန်စွဲမိရင်တောင်မှ အစွဲဖြစ်တဲ့အတွက် ကံရှိသလောက် အကျိုးပေးပြီး ကံကုန်တာနဲ့ ပြန်ဆင်းရမှာပါပဲ။ ဒါကြောင့် အပါယ်လွတ်ရာလမ်း တစ်လမ်းပဲ ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ အသက်ရှင် နေထိုင်တုန်းမှာ ၀ိပဿနာကို မြင့်မြတ်စွာကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီး အသေတတ်အောင် ကြိုးစားဖို့ပါပဲ ။
သစ္စာတရားကို နှလုံးသားမှာ ယုံမှားသံသယမရှိအောင် ကျင့်ကြံသွားနိုင်တဲ့ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် မတုန်လှုပ်တော့ပါဘူး ။အရိယာတို့ရဲ့ လားရာသုဂတိဟာ မြဲသွားပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် သူသွားရမယ့် လမ်းကိုဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်းပဲ သွားပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အဲ့လိုမှ မကျင့်ကြံနိုင်တဲ့ သာမာန် ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကတော့ သေခါနီးအချိန်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ ကိုယ့်အတွက် နောက်ဆုံးအခွင့်အရေး နောက်ဆုံးကျည်ဆန်ဖြစ်တဲ့အတွက် အလွန်အင်မတန်မှ အရေးကြီးလှပါတယ်လို့ စေတနာအရင်းခံပြီး သတိပေးလိုက်ရပါတယ် ။ . .